ဒဏ်ရာပြတိုက်..........: ခရစ်စမတ် ပုံပြင်
ကျွန်တော့်ရင်ထဲက ဒဏ်ရာတွေအကြောင်းနဲ့ အတွေးထဲက ဒဏ်ရာလေးတွေ
ရှေးတုန်းက တင်ရှားခဲ့တဲ့ ဒဏ္ဍာရီတစ်ခုမှာ ဆိုထားတာကတော့ တစ်ခါက လက်ဘနွန်နိုင်ငံရဲ့ လှပသာယာတဲ့ တောအုပ်လေးတစ်ခုမှာ ထင်းရှူးပင်လေးသုံးပင် ပေါက်လာခဲ့တယ်တဲ့။ အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲ ထင်းရှူးပင်တွေဟာ ကြီးထွားနှုန်းနှေးလွန်းတာကြောင့် အဲဒီထင်းရှူးပင်လေးသုံးပင်ဟာ ရာစုနှစ်နဲ့ချီပြီး `ရှင်သန်ခြင်းနဲ့ သေဆုံးခြင်း´၊ `သဘာဝနဲ့ လူသား´ အကြောင်းတွေကို တွေးတော ဖြတ်ကျော်လာခဲ့ကြတယ်။
သူတို့ဟာ ဆော်လမွန် ဘုရင်ကြီးရဲ့ စစ်သည်ရဲမက်တွေ လက်ဘနွန်နိုင်ငံကို ရောက်လာတာ၊ Assyrian လူမျိုးတွေနဲ့ သွေးမြေလွှမ်းခဲ့တဲ့ တိုက်ပွဲတွေကို မြင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်။ ပြီးတော့ ကမ္ဘာ့ရန်တွေဖြစ်တဲ့ ယေဇာဗလ် (Jezebel) နဲ့ ပရောဖတ် အီလိယာ (Elijah) တို့ကိုလည်း တွေ့ဖူးခဲ့တယ်။ သူတို့ရှေ့မှောက်မှာပဲ အက္ခရာကို တီထွင်လာကြတယ်။ ကုန်သည်တွေကလည်း ရောင်စုံအထည်အလိပ်တွေတင်ပြီး သူတို့နားက ဖြတ်သန်းသွားကြတယ်။
ဒီလိုနဲ့ သာတောင့်သာယာရှိတဲ့နေ့တစ်နေ့မှာ ထင်ရှူးပင်လေးသုံးပင်ဟာ သူတို့ရဲ့အနာဂတ်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးကြဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
ပထမတစ်ပင်က ပြောတယ် ` သက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံး ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာတွေ အားလုံးနောက်မှာတော့ ငါ့မှာ ဖြစ်ချင်တာ တစ်ခုပဲရှိတယ်။ အဲဒါကတော့ ရန်ခပ်သိမ်းကို အောင်နိုင်တဲ့ ဘုရင်တစ်ပါးရဲ့ ပလ္လင် ဖြစ်ဖို့ပဲ´
`ငါ့အနေနဲ့ကတော့ မေတ္တာနဲ့ စွန့်လွတ်အနစ်နာ ခံမှုအကြောင်း ခေတ်အဆက်ဆက် ဥပမာပြု ပြောဆိုသွားကြရမယ့် အရာတစ်ခုခုရဲ့ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုဖြစ်ချင်တယ်´ လို့ ဒုတိယတစ်ပင်က ပြောတယ်။
တတိယတစ်ယောက်ကတော့ ` လူတွေငါ့ကို ကြည့်တဲ့အခါတိုင်း ဘုရားသခင်ကို အောက်မေ့ကြတာမျိုး ဖြစ်ချင်တယ်´လို့ ပြောလိုက်တယ်။
နှစ်တွေ၊ နှစ်တွေ ကုန်လွန်သွားလိုက်တာ နောက်ဆုံးမှာတော့ တောအုပ်လေးထဲကို သစ်ခုတ်သမားတွေ ရောက်လာကြတယ်။ သစ်ခုတ်သမားတွေဟာ ထင်ရှူးပင်သုံးပင်လုံးကိုခုတ်ပြီး ခွဲစိတ် ပစ်လိုက်ကြတယ်။
ထင်ရှူးပင်သုံးပင်လုံးမှာတော့ ကိုယ်စီကိုယ်စီ စိတ်ကူးအိပ်မက်လေးတွေနဲ့ပေါ့။ ဒါပေမယ့် လက်တွေ့ဘ၀ကြီးဆိုတာက ငါတို့ ဘာတွေ ဖြစ်ချင်လဲဆိုတာ ဘယ်တုန်းကမှ မမေးဘူးလေ။
ပထမ ထင်ရှူးပင်လေးကိုတော့ တင်းကုတ်လုပ်ပစ်လိုက်ကြတယ်။ နောက်ပြီး သူ့ဆီကပိုနေသေးတဲ့ အသားတွေနဲ့ စားခွက်ကလေးလုပ်လိုက်ကြတယ်။
ဒုတိယအပင်ကိုတော့ ခပ်ကြမ်းကြမ်းစားပွဲတစ်လုံးလုပ်လိုက်တယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ ပရိဘောဂ ဆိုင်ကို ပို့ပစ်ဖို့ပေါ့။
တတိယအပင်က ရတဲ့သစ်ကိုတော့ ရောင်းမရတဲ့အတွက် ပျဉ်အဖြစ်စိပ်ပြီး မြို့ကြီးတစ်မြို့က ဂိုထောင်ထဲမှာ သိမ်းထားလိုက်ကြတယ်။
ထင်းရှူးပင်သုံးပင်ဟာ ခါးသီးစွာနဲ့ပဲ စိတ်ပျက်လက်ပျက် ညည်းညူမိကြတယ် ` ငါတို့ဟာ သစ်မျိုးကောင်းတွေ ဖြစ်ပေမယ့် ငါတို့ကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန်အသုံးပြုဖို့တော့ ဘယ်သူမှ နေရာရှာမတွေ့ကြပါလား´ လို့ပေါ့။
ဒီလိုနဲ့ အချိန်တွေကုန်လာလိုက်တာ တစ်နေ့၊ ကြယ်တာရာတွေ စုံတဲ့ ညတစ်ညမှာ နားခိုစရာမရတတ်တဲ့ ဇနီးမောင်နှံတစ်စုံဟာ ပထမ ထင်းရှူးပင်လေးက ရတဲ့သစ်ကနေ ဆောက်ထားတဲ့ တင်းကုပ်လေးမှာ ညအိပ်နားဖို့ ရောက်လာကြတယ်။ မိန်းမဖြစ်သူက ကိုယ်ဝန် နေ့စေ့လစေ့ကြီးနဲ့ပေါ့။ အဲဒီညမှာပဲ အဲဒီအမျိုးသမီးဟာ သားတစ်ယောက် ဖွားမြင်တယ်။ အဲဒီကလေးငယ်လေးကို စားခွက်လေးထဲက မြက်ခြောက်လေးတွေပေါ် သိပ်လိုက်တယ်။
အဲဒီအခိုက်အတန့်မှာပဲ ပထမ ထင်းရှူးပင်လေးဟာ သဘောပေါက်သွားတယ်။ သူ့ရဲ့ စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေဟာ တကယ်ဖြစ်လာခဲ့ပြီဆိုတာကိုပေါ့။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကြီးကျယ်ဆုံးသော အောင်နိုင်သူ လူသားရဲ့ အထောက်အပံ အဖြစ်ကို သူရလိုက်ပြီလို့ပေါ့။
နောက် နှစ်အနည်းငယ်အကြာမှာ အိမ် ခပ်သေးသေးတစ်လုံးထဲမှာ လူအချို့ စားကြသောက်ကြတယ်။ ဒုတိယ ထင်းရှူးပင်ကနေ လုပ်ထားတဲ့ စားပွဲမှာပေါ့။ အဲဒီလူတွေထဲက တစ်ယောက်က မစားသောက်ကြခင်မှာ စားပွဲပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ ပေါင်မုန့်နဲ့ ၀ိုင် အချို့ကို နမူနာထားပြီး စကားတစ်ချို့ပြောတယ်။
အဲဒီမှာ ဒုတိယထင်းရှူးပင်ဟာလည်း သဘောပေါက်သွားတယ်။ သူဟာ ပေါင်မုန့်နဲ့ ၀ိုင်တင်တဲ့ စားပွဲသက်သက်မဟုတ်တော့ပဲ ၊ ဘုရားသခင်နဲ့ လူသားကြား ဆက်သွယ်မှုရဲ့ အထောက်အပံ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့ပြီဆိုတာကိုပေါ့။
နောက်တစ်နေ့မှာတော့ တတိယထင်းရှူးပင်လေးက ရတဲ့ ပျဉ်တွေနဲ့ လက်ဝါးကပ်တိုင်လုပ်လိုက်ကြတယ်။ နောက်နာရီအနည်းငယ်အကြာမှာတော့ ဒဏ်ရာတွေနဲ့ လူတစ်ယောက်ကို ခေါ်လာကြပြီး အဲဒီလက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ သံတွေနဲ့ ရိုက်လိုက်ကြတယ်။ တတိယမြောက် ထင်းရှူးပင်လေးဟာ စိတ်ပျက်ဝမ်းနည်းစွာနဲ့ သူ့ရဲ့ အသုံးပြုခံနေရာအတွက် ကံကြမ္မာကို ကျိန်ဆိုမိတယ်။
ဒါပေမယ့် သုံးရက်တောင် မလွန်ခင်မှာပဲ သူလည်းသဘောပေါက်သွားတယ်။ သူ့လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ အချိတ်ခံရတဲ့ လူသားဟာ လောကရဲ့ အလင်းတန်ဆောင်ဖြစ်နေတာ။ သူ့ရဲ့ လက်ဝါးကပ်တိုင်ဟာ နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းရာ လက်နက်အဖြစ်ကနေပြီး လွတ်မြောက်ရာ၊ အောင်မြင်ရာ သင်္ကေတတစ်ခုအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားခဲ့တာ၊ စတာတွေအားလုံးကိုပေါ့။
ထင်ရှူးပင်လေးသုံးပင်ရဲ့ ကံကြမ္မာကတော့ အဲလိုအဆုံးသတ်သွားခဲ့တယ်။ စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေနဲ့ပတ်သက်လာရင် အမြဲဖြစ်နေကြအတိုင်းပဲ- သူတို့ရဲ့ အိပ်မက်တွေဟာ အကောင်အထည်ပေါ်လာခဲ့ကြတယ်၊ ဒါပေမယ့် သူတို့မျှော်မှန်းထားခဲ့တဲ့ ပုံစံတွေနဲ့တော့ တခြားစီပေါ့….
Paulo Coelho ရဲ့ christmas story ကို ရုရှားဘာသာမှ ပြန်ဆိုပါတယ်။
notes; ဘာသာပြန်တွေ မရေးဖြစ်တာကြာပါပြီ။ ခရစ်စမတ်အကြောင်း ဖြစ်နေတာရော မူရင်းစာက အလွယ်တကူရှိနေတာကြောင့်ရော ပြန်ဖြစ်သွားတာပါ။ အမှတ်တရပေါ့။ အားလုံးအတွက် ခရစ်စမတ်လက်ဆောင်လို့ ပြောလည်း ရပါတယ်။ Paulo Coelho ရဲ့စာအုပ်တွေကို The Alchemist ကနေစပြီး ဖတ်ဖူးခဲ့တာပါ။ အဲဒီကနေစပြီး ကြိုက်ခဲ့တာလို့လည်း ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒါလေးကိုတော့ ခရစ်စမတ် အမှတ်တရအနေနဲ့ တင်ဖြစ်တာပါ။ သူကတော့ ဘာသာရေးနဲ့ဆက်နွှယ်ပြီးရေးထားတာ ဖြစ်ပေမယ့် ပေးချင်တဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျ လေးကို သဘောကျတာကြောင့် ဘာသာပြန်ဖြစ်သွားတာပါ။ The Alchemist မှာလည်းပဲ လူတွေရဲ့ မျှော်လင့်ချက် အိပ်မက်လေးတွေအကြောင်းပဲ ရေးထားတာပါ။ လူတွေအတွက် မျှော်လင့်ချက်ထက် အရေးကြီးတာရယ်လို့ရော ရှိမှမ၇ှိတာပဲလေ။ ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ အိပ်မက်တွေဟာ ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေဖြစ်နေ တစ်နေ့မှာတော့ မုချဖြစ်လာမှာပဲမဟုတ်လား။ ကျွန်တော်တို့ မျှော်လင့်သလိုတော့ ဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်မှာပေါ့ဗျာ။
ပျော်ရွှင်ဖွယ် ခရစ်စမတ်ပါ (ဝေလင်း)
Posted by wai linn at 7:53 PM
Labels: အထိမ်းအမှတ်နေ့များ, ရေးမိတာလေးတွေ..........
12/22/2011 2:12 AM
Christmas story လေးသိလိုက်ရလို့ကျေးဇူးပါရှင်
12/22/2011 8:45 PM
Hi!Great and interesting blog you have:) Come and visit my site too. http://ads.com.mm/?cid=4fd60e65e4b0fa6db841e338&utm_campaign=ads_mm_lb_blog_martaste&utm_source=ads_lb_blog&utm_medium=lb_blog
7/10/2012 9:40 PM
Art by wailinn is licensed underaCreative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Based onawork at homeofns.blogspot.com.
sosegado (ဆို ဆီ ဂါး ဒိုး) တည် ငြိမ် အေး
HORIBA: PORTABLE pH METER D-71 | 081322 599149 | JUAL ORP METER
ကျွန်တော်နှင့် တက္ကသီလာ မှ အက္ခရာများ (၄)
ဂလိုဘယ်အမြည်းနှင့် ယမကာဖရီး (၇)
ကယ်လ်ဆီယံ (ထုံးဓာတ်) အားဖြည့်ဆေးတွေကြောင့် Heart Attack (ရုတ်တရက် နှလုံးဖောက်ပြန်မှု) အန္တရာယ်တိုးမြင့်နိုင်
Me and My Bar Nyars
ငှက်ငယ်လေး ရဲ့ ဒိုင်ယာရီ
© Blogger မောင်မိုး
.: MY SOUL
Something is wrong when
love is true.
When the first love touch
You beaPoet.
junction of edu
Top 50 myanmar blogs
send lerge files
အဝေးကို ထွက်ခွာသွားကြပေါ့။ ။
ကျွန်တော့် မှတ်မှတ်ရရ... (4)
blog တစ်နှစ်ပြည့်... (1)
နူးညံ့မှု( ၀တ္ထုရှည်) (1)
x=w=e=a=v=i=n=g=y=p=o=e=t=r=y s pac e
ဖြေလျော့ခြင်း နင့် သီအိုရီ
ဘလော့ဂ်စာမျက်နှာ - နေမျိုးထက်
ဘာသာရေး blog များ